Indlela emfutshane ngenxa yokufuna ukwazi Russian abantu - Funda isirussian - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Indlela emfutshane ngenxa yokufuna ukwazi Russian abantu - Funda isirussian
Musa ncuma e bolunye uhlanga nje ngenxa yokuba uhlobo
Russians ingaba kakhulu enyanisekileyo kwaye elula kwi-zimvo zaboYiyo wena musa khangela kubo, ehamba phantsi street smiling. Ezi smiles ingaba usharedi kuphela yi-abahlobo kunye neentsapho. Kodwa kwesinye isandla, i-Russians ingaba vula i-unye ukwenza abahlobo kunye nabani na.
Hayi kuphela ncuma, kodwa kanjalo umbuliso utshintsho kwi uthotho lweempawu zonxibelelwano kwi-hug okanye i-Pat kwi shoulder, kwaye xa ufuna ukwenza abahlobo kwakhona.
Friendship nge-Russian ayikho wemiceli-obstacle enako koyisa. Ngoko ke, yintoni etiquette ngenxa yokufuna ukwazi Russian abantu? Ingaba ke ziyahluka kolu kwamanye amazwe? Kweli nqaku, uza kufumana i-Jikelele iincam kwi njani ukwenza abahlobo kunye Russians. Awunokwazi nje phezulu hamba na Russian kwaye umthetho njenge ndlela abahlobo kuba ubomi bakho bonke. Kuthatha ixesha ukwakha ubudlelane, kwaye wonke umzamo omkhulu kufuneka senziwe ukwenza njalo. Russians rhoqo thatha ixesha ukufumana ukwazi umntu isigqibo sokuba ngaba ngabo trustworthy okanye hayi. Ngoko ke ukuba ufuna ukufunda i-Russian ulwimi, kufuneka usebenze nzima kwaye selflessly ukuphumelela intliziyo yayo. Ngexesha lokuqala iintlanganiso, baya silindele politeness kwaye kulula formality phakathi kwenu. Shukumisa ngamnye nezinye ke ezandleni kwi-umbuliso, igosa igama, idilesi, njalo-njalo. Awunokwazi nje yiya kwi-kwaye ngoko nangoko nika ngokwakho i-nickname. Ukuba abe polite, hlala kwi window ukuba yena ngenene ifuna ukwazi ngcono kunokuba bakwenzayo.
Kuxhomekeke njani kakhulu ngabo elikhulu okanye encinane, indlela ngabo greeted kusenokuba ezahlukeneyo (funda"umbuliso kulutsha"kwi-Russia kwaye"umbuliso abadla"kwi-Us).
Ukongeza, kufuneka kuqatshelwe ukuba ndinovelwano of personal inkululeko kuba Russians zibe nje noko ngaphantsi kwamanye amazwe. Ke ngoko, kuyenzeka ukuba ngexesha incoko ufuna kukufutshane ukuba ngamnye enye, kwaye kunokubonakala ngathi i-intimate nto. Nangona kunjalo, oku nje umcimbi ka-abantu abaqhelekileyo imicimbi yayo.
Ukuba ufuna ukwenza abahlobo kunye isirussian, kufuneka ube honest malunga nayo.
Russians ingaba vula yabo uvakalelo kunye opinions, ngoko ke kufuneka kanjalo kubekho vula.
Kufuneka bonisa imizwa yakho kwaye emotions, kufuneka kuthi ngqo into uziva, ngubani ofuna, ukuba ucinga ntoni okanye ukuzenza.
Ngoko ke, awuyi kukwazi ukuqonda imizwa yakho kwaye get ukwazi ngamnye ezinye ngcono. Xa idibana kwi-kwangaye ezifakiweyo, o. xa uxhulumaniso reinforced.
Ngoko ke, musa kuba besoyika ukuba buza imibuzo okanye kuthi nokuba uqalisa yakho intloko.
Baya kukholelwa ukuba ncuma kufuneka lokwenene
Oku kuya kubonisa ukuba unomdla ukwazi malunga nabo kwaye bazise kuwo malunga nawe. Ukongeza kwi-ngasentla, kubalulekile owamkelekileyo ukuba kuwazisa yakho ubuthathaka. Uya kwamkelwa kuba ngubani na kuni ngabo, nokuba yakho nje, ngoko ke musa worry malunga ujonge nobuthathaka okanye ubhideke. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba kufuneka senze izinto ngathi bragging, humiliating, okanye insulting (ingakumbi usapho lwakho). Yamkela eyakho nokusilela kwaye ubuthathaka, kodwa musa tolerate engalunganga ukuziphatha.
Njengoko kukhankanywe ngasentla, Russians thatha ixesha labo kwaye trust abanye.
Ukuba ufuna ukuya kuhlangana Russians, uza kuba ukwenza izinto ezininzi iinzame ukuphumelela kwabo phezu. Ukususela uninzi friendships ngokubanzi ukuphuhlisa, kuyimfuneko ukuba abe elungileyo yomphulaphuli kwaye unawo umdla kubo.
Nkqu ukuba wabo ingaba ixesha elide kwaye imdaka, kufuneka bonisa ukuba ufuna enye, ngubani ilungele mamela kubo.
Russians bamele kanjalo kakhulu abanekratshi zabo inkcubeko kunye achievements, ngoko ke musa woyikayo ukubonisa inzala yakho. Baya kuba ndonwabe emandikuxelele yona vetshe malunga Russian inkcubeko, imbali, okanye personal umdla ezifana uluncwadi okanye isithuba exploration. Amanye amanyathelo uyakwazi kuzisa ingaba bechitha ngakumbi ixesha kunye nabo. Asingabo bonke Russians basele ngayo, kodwa ukuba bobabini ngaba kunokwenzeka ukuba dislike ngayo, ke enkulu, indlela ukuchitha ixesha kunye. Ubukhe kunye musa ukusela, usakwazi ukuchitha ixesha kunye kwaye yathetha ixesha elide. Intsingiselo umhlobo, apho unako njengalowo njengoko a guy, kubalulekile kuba Russians. Baya musa njenge ukubiza umntu umhlobo. Russians bakholelwa ukuba abahlobo ingaba nyani umntu ngubani owaziyo njani ubalo, kwaye hayi nje ithuba kuba umntu ngubani owaziyo kancinci ngcono kunokuba abanye. Ke ngoko, xa unxibelelwano nge-Russian, musa rush ukubiza umhlobo. Kuya kuba ngaphezulu ulwim kunayo nantoni na enye into. Kuba Russians, friendship kanjalo na into ifuna ukuba ube wathi ngaphandle nelikhwazayo.
Le into ukuze ube kunye nokuqonda, nkqu hayi umzekelo-icatshulwe kuyo.
Kuba nabo, abahlobo nosapho kuza kuqala, kwaye imigaqo beze okwesibini. Kubalulekile zabo, uluvo umsebenzi ukwenza into ukunceda umhlobo okanye ilungu losapho abo iimfuno kuyo. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuthetha isirussian, kufuneka baqonde yenkcubeko neeyantlukwano kwaye baqonde budlelwane nabanye. Lo etiquette intlanganiso i-Russian abantu. Ukuba isixa phezulu: Musa bambiza ngokuba umhlobo kwaphela. Ukutyala imali yakho ixesha nomzamo kwi budlelwane, kwaye uza kubona isihlobo abo baya kukunceda xa kufuneka oko. Ndiyathemba ukuba eli nqaku liza kukunceda baqonde ngcono Russian inkcubeko.
Ezinye enxulumene amanqaku malunga uthotho lweempawu zonxibelelwano ka-Russian inkcubeko kunye Russian etiquette, malunga ngakumbi sympathetic izinto kuba Russian abantu kwaye malunga ngakumbi hateful izinto kuba abantu Russian.
Na italia sin registro
ividiyo incoko kunye guys ividiyo couples Dating ukufumana acquainted kuba ezinzima ubudlelwane phakathi Dating kunye ifowuni amanani free Chatroulette ividiyo incoko Dating esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi kunye umnxeba esisicwangciso-mibuzo roulette nge-girls dibanisa ikhangela umntu kuba ezinzima budlelwane free chatroulette